Ma iga caawin kartaa inaan fahmo keywords Amazon leh talooyin iyo tabaha?
Ka hor intaan wax kale, aan ku bilowno qaar ka mid ah qeexitaanada aasaasiga ah iyo fikradaha aasaasiga ah ee ku saabsan erayada muhiimka ah ee Amazon, raacay talooyin iyo qaar ka mid ah talooyinka wax ku oolka ah ee liiska takhasuska. Sidaas, maxay ka dhigaysaa cilmi-baarista muhiimka ah, gaar ahaan dhinaca aragtida ganacsiga macaamilka ee maraakiibta internetka ah iyo fikradda casriga ah ee ganacsiga ganacsiga ee lagu qaado miisaanka? Xayeysiinta alaabta amazon iyo liiska muhiimka ah ee loo baahan yahay si loo dhamaystiro hawsha guud ahaan waxaa loola jeedaa in ay noqoto geedi-socod ballaaran oo baadhitaan iyo baaris ah oo loogu talagalay ururinta ereyada muhiimka ah iyo weedhaha dhaadheer oo ay isticmaalaan dadka dukaamada sameeya samaynta alaabta (tusaale, magaca alaabta, magaca, magaca, ama sheyga).
Laakiin suurtogal ma ahan dhammaan ereyada iyo odhaahyada raadinta ee ku saabsan shey gaar ah in laga helo hal meel? Waxaa laga yaabaa inaad hore u qiyaastay in maya, ma aha. Taas macnaheedu waa inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo cilmi-baaris oo muhiim ah oo laga heli karo Webka, ma jiraan waqti aad u badan oo lagaa rabo in laguugu isticmaalo habka cilmi-baarista iyo liis-u-helidda. Oo halkan waa marka qaar ka mid ah talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan keywords keyword Amazon iyo liis gareysey talooyin ku yimaadaan ciyaar. Hoos waxaan kugula dardaarmayaa inaad ku tusiso hage gaaban oo ugu dambeyntii ka dhigo wax kasta oo cad.
Listing Product Optimization on Amazon iyo Keywords Keywords Tips
Halkan waxaa ku jira qaar ka mid ah nidaaminta optimization nidaamyada keydka Amazon iyo talooyin kaa caawin kara taas. Iyadoo la tixgelinayo inaad ku sii jiri karto si aad u gudubto istaraatiijiyada cilmi baarista ee muhiimka ah (oo leh fikrado tartan iyo fursadaha iibka alaabooyinka), waxaad hubaal ka heli doontaa waxaad raadineyso. Waxaan ula jeedaa in ay jiraan ereyo gaar ah oo kala duwan iyo odhaahyada raadinta ee ku haboon - adigoo sugaya inaad isticmaasho si aad u sii fiicnaato, horumarka sarreeya, iyo isbeddel weyn. Wax walba waa wax sahlan - hadana sheygaaga kuugu dhow ayaa u dhigma filashooyinka rasmiga ah ee dhabta ah, macaamiisha ugu badan ee suurtogalka ah ayaa ugu dambeyntii ugu dambeyntii loo badalayaa iibsadahaada.
Tallaabada Koowaad: Bilaabida Qalabka Xuquuqda
Dabcan, ma jirto qalab qumman oo kugu soo kordha si sax ah keywords keywords Amazon ama talooyin kasta si loo hubiyo wax natiijooyin degdeg ah oo si buuxda loo cabbiri karo..Si kastaba ha noqotee, laga bilaabo aasaaska aasaasiga ah iyo kormeerida Google ee Qorshaha Keyword (Keyword Planner) ee laga yaabo inuu yahay xalka ugu fiican ee loo yaqaan 'kickstart solution' si uu u eego tirooyinka hadda raadinta iyo diyaarinta liiska hubinta ee muhiimka ah ee ereyada caanka ah iyo ereyada raadinta ee dadka isticmaala Google si loo helo waxa ay u baahan yihiin aduunka oo dhan. Sidaa oo kale, tallaabadaada xigta waa inaad isku dhejiso wax walboo dhan oo aad ku hayso ereyada muhiimka ah ee ugu dambeyntii kaa caawin doonta liiskaaga.
Talaabada labaad: Iska hubi raadsashada raadinta Real Shopping
iyadoo la raacayo taageerayaasha online-ka si loo ogaado isbeddellada dhabta ah ee raadinta - labadaba Amazon, iyo goobaha kale ee dadku ku badan yihiin oo badanaaba soo bandhigaya liiska alaabooyinka la midka ah oo la isticmaalayo iyo isticmaalaya xeeladaha wax soo-saarka (advanced optimization solutions) iyo sidoo kale meelaha kale ee dukaamaysiga dukaamada sida eBay, Alibaba, Walmart, iwm.). Sidaa darteed, waa waqtigii ugu dambeyntii bilaabi lahaa in aad raadiso fursadahaaga nuugaaga iyo fursadahaaga qaybta alaabta muhiimka ah ee Amazon keywords iyo helitaanka talooyin leh talooyin qaali ah oo si gaar ah loogu talagalay adiga. Isku day in aad isku daydo mid ka mid ah qalabkan raadinta dufanka buuxa iyo falanqeynta: KeywordInspector, Baaxadda, Ereyada Ganacsi, iyo sidoo kale Sayniska Sayniska. Dhamaantood waxay isticmaalaan qaabab internetka ah oo la adeegsan karo ama qalabka software loogu talagalay inay ku siiyaan sawir buuxa oo ah keywords Amazon, talooyin wax ku ool ah, iyo fikrado macquul ah oo dhab ah - ka soo jiiday xaqiiqda dukaameysiga nool, ama si toos ah uga qaata ganacsatada horay u iibiya qaybta Source .